भुसुना किन भनियो ? « Jana Aastha News Online
भुसुना किन भनियो ?
प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७३, शनिबार ०५:२४
चलाउने यन्त्र अन्तै भएपछि यतातिर ‘चल्नेहरुले’ बोल्ने पनि उतैको कुरा न हो ! नेपालमा चुनाव नहोस्, संविधान कार्यान्वयनमा बाधैबाधा आउन् र अस्थिरता रहिराखोस् भनेर कसले चाहेको छ भाषामै लेखिहाल्नु नपर्ला । सोमबार तिनै कुरा मुखै खोलेर बालुवाटारमा व्यक्त भएको छ ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहितै पारित भए पनि चुनाव त हामी हुनै दिन्नौँ ।’ उनले यति बोलेपछि छलफल कक्षमा सन्नाटा नै छायो । भन्दै गए, ‘मधेसमा राज्यको उपस्थितिका नाममा सेना र पुलिससम्म मात्रै सिमित हुनेछ, तपाईंहरुको कुनै दाल गल्नेवाला छैन । हामी चुनाव हुन दिन्नौँ ।’
यसपछि उपेन्द्र यादव कड्किए, ‘अब यस्तो नौटंकी नगराँै, आ–आफ्नो बाटो लागौँ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी भनेका एउटै हुन् ।’ यसपछि बल्ल राजेन्द्र महतोले भने, ‘यो संशोधन पारित नभई चुनावको कुरै नगर्नुस् !’
यस्तो कुरा राखेर मधेसी नेता बाहिरिए । त्यसपछि देउवाले त्यहाँ रहेका अन्य दलका नेतासँग भने, ‘यी त भुसुनामात्र हुन् ।’ देउवाको भनाइलाई यस्तो अर्थ लगाउन सकिन्छ कि, यिनीहरु भुसुना हुन्, खास तŒव पारि छ । अर्को अर्थ हो, यी कराउँदै गर्छन्, हामी चुनावमा जाऔँ ।
खर्च आफैँ गर्ने र त्यसको लेखापरीक्षण पनि आफैँ गर्ने ? अर्थात्, कसुरदारले नै मुद्दा छिन्ने प्रावधान कहिँ हुन्छ ? तर, यस्तै भएको छ, संसदमा । प्रचण्डले खर्च गर्ने र उनैका मान्छेले सदर गर्ने मेसो मिलाउँदै व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको निर्वाचन सोमबार उनकै पार्टीका सांसद जितेका छन् । सांसदहरु भन्दै थिए, ‘चुनाव माओवादीले जित्यो तर संसदीय प्रणालीले हार्नेगरी ।’ अब चुनाव नगर्ने, प्रधानमन्त्री पनि रहिरहने दुबै सुविधा प्रचण्डले पाउने दिन सकिए । हप्ता–दश दिनमा मुलुकले एउटा बाटो पाउने स्थिति बन्दैछ ।